हिलोमा फसेको ट्रक निकाल्ने प्रयास गर्दागर्दै पहिराले पुरिएपछी…. – Namaste Host
June 21, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on हिलोमा फसेको ट्रक निकाल्ने प्रयास गर्दागर्दै पहिराले पुरिएपछी….
म्याग्दी- बेनी–जोमसोम–कोरला– सडकखण्ड अन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४, काभ्रेभीरमा आइतबार दिउँसो एक मालवाहक ट्रक पहिरोले पुरिएको छ । मुस्ताङको जोमसोमबाट सामान पु-याएर म्याग्दीतर्फ फर्किदै गरेको बेनीका एक ब्यवसायीको ग १ क ३४९२ नम्बरको ट्रक दिउसो करिव १ बजेको समयमा सडक माथिबाट ख’सेको पहिरोले पु’रिएको बेनी–जोमसोम सडकखण्डका सुपरभाईजार इन्द्रसिंह शेरचनले बताए ।
जोमसोमबाट मालसामान पु-याएर म्याग्दीतर्फ फर्किदै गरेको मालवाहक ट्रक दिउँसो साँढे १२ बजेको समयमा हिलाम्मे सडकमा फसेको थियो । हिलाम्मे सडकमा ट्रक फ’सेपछि चालक र सहचालक बाहिर निस्किएको बेलामा माथिबाट ख’सेको पहिरोले ट्रकको पुरै भाग पुरिएको छ ।
पहिरो ख’सेको स्थानमा फ’सेको ट्रक पुनः ढुङ्गा ख’स्न थालेपछि चालक र सहचालक बाहिर निस्किएका थिए । उनीहरु बाहिर निस्किएको करिब १० मिनेटको अन्तरालमा पहिरो ख’सेको थियो । ट्रक पहिरोले थि’चिएको अवस्थामा रहेको घाँसा प्रहरी चौकीले जनाएको छ ।
प्रहरी निरीक्षक आशिष अधिकारीका अनुसार हिलोमा फ’सेको ट्रकका निकाल्ने प्रयास गर्दागर्दै माथिबाट ख’सेको पहिरोले पु’रिएको थियो । चालक र सहचालक सकुशल छन् ।सडक माथिबाट ख’सेको पहिरोले ट्रकको पूरै भाग पु’रिएर क्ष’त्विक्षत् भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार ट्रक अझै पहिराले पुरिएकै अवस्थामा रहेको छ ।यसै हप्ता रुप्से झरनामा फसेको बा १८ च ६९६२ को हाइलक्सलाई समेत स्काभेटरको सहायतामा बाहिर निकालिएको थियो । म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा अवस्थित उक्त स्थान निकै जोखिम मानिन्छ ।
भिरालो जमिन, भूमिगत पानी, कमजोर भूबनावटका कारण काभ्रे र घाँसा क्षेत्रमा निरन्तर पहिरोका साथै बर्षातको समयमा बाटो अवरुद्ध हुने गरेको छ । मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्ग संग जोड्ने ७६ किलोमिटरको सडकखण्ड अन्र्तरगत विभिन्न ठाउँमा सानोठुलो पहिरोले सवारीसाधन आवतजावतमा स’मस्या हुने गरेको छ ।
मनकारी सन्तोष देउजा : १४ लाखको राहत लिएर यसरी पुगे हेलम्बु (भिडियो हेर्नुस् )